သမီးလေးနဲ့ရှော့ပင်ထွက်ရင်း ပရိသတ်များက သမီးလေးကို ၀ိုင်းချစ်ကြတော့ ပီတိတွေဝေနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ - ZeeKwat
Home » Celebrity News » သမီးလေးနဲ့ရှော့ပင်ထွက်ရင်း ပရိသတ်များက သမီးလေးကို ၀ိုင်းချစ်ကြတော့ ပီတိတွေဝေနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
သမီးလေးနဲ့ရှော့ပင်ထွက်ရင်း ပရိသတ်များက သမီးလေးကို ၀ိုင်းချစ်ကြတော့ ပီတိတွေဝေနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
မေမေခိုင်နှင်းဝေက သင်္ကြန်တွင်း သမီးလေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများကို ၀ယ်ရင်း ရှော့ပင်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆင်ရုပ်အင်္ကျီဆင်တူလေးနဲ့သားအမိနှစ်ယောက် အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းနေတော့ ပရိသတ်များက မေမေ့ထက် သမီးလေးကို ပိုပြီးဝိုင်းချစ်နေကြတာတွေ့ရတဲ့အခါ မေမေတစ်ယောက် အတော်လေးပီတိတွေဖြာနေပါတယ်။
“သမီးလေးနဲ့ Shopping Day 💸💸💸 သင်္ကြန်တွင်းသမီးလေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ နို့မှုန့် နဲ့ အသုံးအဆောင်တွေရယ်, အိမ်အတွက်လိုအပ်တာတွေရယ် ဝယ်ဖို့ Shopping ပေါ့ … အရင်ကဆို အပြင်သွားရင် ကျမကိုကြည့်ကြ, ဓာတ်ပုံတွေလာရိုက်ကြနဲ့ အခုတော့ သမီးလေးက ကျမထပ် ပိုလို့တောင် ချစ်ခင်တဲ့သူများပြီးသမီးလေးကိုပဲဝိုင်းကြည့်ပြီးချစ်နေကြတော့ မေမေကပီတိတွေကိုဖြစ်လို့ 💗” ဆိုပြီး သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ဧပြီလ (၁၂) ရက်နေ့က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဈေးဝယ်ရင် တွန်းလှည်းလေးထဲထည့်ပြီး ခေါ်ခေါ်သွားတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေက သမီးလေးက သူမအတွက် အဖော်လေးဖြစ်သလို အပြင်သွားလို့ သမီးမပါရင် သမီးလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေ ကြည့်နေမိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“သမီးလေးကိုတွန်းလှည်းလေးထဲထည့်ပြီး ကျမဈေးဝယ်သမျှခေါ်သွားတာလေ, အခုဆိုရင်ကျမရဲ့အချိန်တော်တော်များများကို သမီးလေးက နေရာယူထားပြီ… ဘယ်သွားသွားသူ့ကိုခေါ်သွားချင်တယ်. သမီးမပါပဲ အပြင်သွားနေရရင်တောင် သမီးလေးရဲ့videoလေးတွေဖွင့်ကြည့်နေမိတယ်…” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
သမီးလေးနဲ့ သူမအကြားက သံယောဇဉ်လေးကို ပြောပြခဲ့ပြီး သမီးလေးက သူမထက် တော်ရမယ်၊ ထက်မြက်ရမယ်လို့ ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“သံယောဇဉ်ဆိုတာ မေတ္တာတရားအပေါ်အခြေခံပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတတ်တာမျိုး ❤
သမီးလေးအပေါ်မှာ ကျမဘယ်လောက်တောင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့နှောင်ဖွဲ့နေမိပြီလဲဆိုတာ ကျမကိုယ်ကျမတောင် မသိတော့ပါဘူး… ကျမ ပြောရဲတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ် ,,, *** ကျမ သမီးလေး ကျမထပ် တော်ရမယ်,ထက်မြက်ရမယ်, လူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုသူတစ်ယောက်ဖြစ်စေရမယ်*** လို့ပေါ့ သမီးလေးရဲ့မေမေ ခိုင်နှင်းဝေ” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေဟာ အခုဆိုရင် သားလေး (၃) ယောက် သမီးလေး (၂) ယောက် ဗိုက်ထဲက (၁) ယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်နေပြီး အနုပညာလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ခွင်မဲ့ ဂေဟာ ကိုဆောက်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ကလေးငယ်လေးအတွက် ဦးစားပေးပြီးရိုက်ထားတဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းပညာပေးဇာတ်ကား ‘ပန်းရိုင်းမျက်ရည်’ ရုပ်ရှင်ကားကို ရုံတင်ခွင့်မရသေးဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာ ခိုင်နှင်းဝေက မြို့တော်ဝန်မဟာသင်္ကြန် ဖွင့်ပွဲမှာ သီချင်းများနဲ့သီဆိုကပြဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
Source From khine hnin wai
မမေခေိုငျနှငျးဝကေ သင်ျကွနျတှငျး သမီးလေးအတှကျ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးမြားကို ဝယျရငျး ရှော့ပငျထှကျခဲ့ကွပါတယျ။ ဆငျရုပျအင်ျကြီဆငျတူလေးနဲ့သားအမိနှဈယောကျ အရမျးကိုခဈြဖို့ကောငျးနတေော့ ပရိသတျမြားက မမေထေ့ကျ သမီးလေးကို ပိုပွီးဝိုငျးခဈြနကွေတာတှရေ့တဲ့အခါ မမေတေဈယောကျ အတျောလေးပီတိတှဖွောနပေါတယျ။
“သမီးလေးနဲ့ Shopping Day 💸💸💸 သင်ျကွနျတှငျးသမီးလေးအတှကျ လိုအပျတဲ့ နို့မှုနျ့ နဲ့ အသုံးအဆောငျတှရေယျ, အိမျအတှကျလိုအပျတာတှရေယျ ဝယျဖို့ Shopping ပေါ့ … အရငျကဆို အပွငျသှားရငျ ကမြကိုကွညျ့ကွ, ဓာတျပုံတှလောရိုကျကွနဲ့ အခုတော့ သမီးလေးက ကမြထပျ ပိုလို့တောငျ ခဈြခငျတဲ့သူမြားပွီးသမီးလေးကိုပဲဝိုငျးကွညျ့ပွီးခဈြနကွေတော့ မမေကေပီတိတှကေိုဖွဈလို့ 💗” ဆိုပွီး သူမရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ ဧပွီလ (၁၂) ရကျနကေ့ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
စြေးဝယျရငျ တှနျးလှညျးလေးထဲထညျ့ပွီး ချေါချေါသှားတဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေ သမီးလေးက သူမအတှကျ အဖျောလေးဖွဈသလို အပွငျသှားလို့ သမီးမပါရငျ သမီးလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးတှေ ကွညျ့နမေိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“သမီးလေးကိုတှနျးလှညျးလေးထဲထညျ့ပွီး ကမြစြေးဝယျသမြှချေါသှားတာလေ, အခုဆိုရငျကမြရဲ့အခြိနျတျောတျောမြားမြားကို သမီးလေးက နရောယူထားပွီ… ဘယျသှားသှားသူ့ကိုချေါသှားခငျြတယျ. သမီးမပါပဲ အပွငျသှားနရေရငျတောငျ သမီးလေးရဲ့videoလေးတှဖှေငျ့ကွညျ့နမေိတယျ…” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
သမီးလေးနဲ့ သူမအကွားက သံယောဇဉျလေးကို ပွောပွခဲ့ပွီး သမီးလေးက သူမထကျ တျောရမယျ၊ ထကျမွကျရမယျလို့ ဆကျလကျပွောပွခဲ့ပါတယျ။
“သံယောဇဉျဆိုတာ မတ်ေတာတရားအပျေါအခွခေံပွီးမှဖွဈပျေါလာတတျတာမြိုး ❤
သမီးလေးအပျေါမှာ ကမြဘယျလောကျတောငျ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှနေဲ့နှောငျဖှဲ့နမေိပွီလဲဆိုတာ ကမြကိုယျကမြတောငျ မသိတော့ပါဘူး… ကမြ ပွောရဲတဲ့စကားတဈခုရှိတယျ ,,, *** ကမြ သမီးလေး ကမြထပျ တျောရမယျ,ထကျမွကျရမယျ, လူသားတှအေတှကျအကြိုးပွုသူတဈယောကျဖွဈစရေမယျ*** လို့ပေါ့ သမီးလေးရဲ့မမေေ ခိုငျနှငျးဝေ” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ခိုငျနှငျးဝဟော အခုဆိုရငျ သားလေး (၃) ယောကျ သမီးလေး (၂) ယောကျ ဗိုကျထဲက (၁) ယောကျရဲ့မိခငျဖွဈနပွေီး အနုပညာလုပျငနျးမြားကိုလညျး ကွိုးစားလုပျကိုငျနတော ဖွဈပါတယျ။ ရငျခှငျမဲ့ ဂဟော ကိုဆောကျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ ကလေးငယျလေးအတှကျ ဦးစားပေးပွီးရိုကျထားတဲ့ သကျငယျမုဒိမျးပညာပေးဇာတျကား ‘ပနျးရိုငျးမကျြရညျ’ ရုပျရှငျကားကို ရုံတငျခှငျ့မရသေးဘူးလို့လညျး သိရပါတယျ။
သင်ျကွနျအကွိုနမှေ့ာ ခိုငျနှငျးဝကေ မွို့တျောဝနျမဟာသင်ျကွနျ ဖှငျ့ပှဲမှာ သီခငျြးမြားနဲ့သီဆိုကပွဖြျောဖွခေဲ့ပါတယျ။